ASA UPVC mitafo fanitso tafo taratasy W1025 - China Hubei Shengyu fitaovam-panorenana
ANGU tafo taratasy
FRP translucent tafo taratasy
Industrial tafo taratasy
Residental tafo taratasy
UPVC rindrina takelaka
High temperatuer & harafesiny fanoherana tafo taratasy
Glass fibre nanamafy resin tafo taratasy RY720-B
ASA UPVC mitafo fanitso tafo taratasy W1025
ASA resin UPVC mitafo fanitso tafo taratasy T980
FRP daylighting taratasy TT980
UPVC rindrina tontonana T1110
FRP daylighting taratasy WW1025
Shengyu UPVC mitafo fanitso tafo taratasy, na ny fanaka uPVC, malamalama farany tamin'ny ASA resin. Tsy mbola miovaova ny lokony sy ny fananana ara-batana eo ambany hiringiriny-Violet taratra, dampness, hafanana, chillness sy ny fiantraikany. Izany no ampiasaina amin'ny atrikasa be, trano fanatobiana entana, ny trano fonenana sy ny isan-karazany tafo maharitra amin'ny taona maro fampiharana tantara amin'ny tany mandroso maro. Shengyu UPVC tafo taratasy dia safidy vaovao ho an'ny tafo sy ny rindrina cladding fanorenana. Tena mafy, mateza ny lokony sy maivana, tha tsara kokoa ...
Supply Fahaizana: 100 000Meters isam-bolana
Fandoavam-bola Terms: L / CT / T
FOB Price: 2.99-7.75 / metatra toradroa
Shengyu UPVC mitafo fanitso tafo taratasy, na ny fanaka uPVC, malamalama farany tamin'ny ASA resin. Tsy mbola miovaova ny lokony sy ny fananana ara-batana eo ambany hiringiriny-Violet taratra, dampness, hafanana, chillness sy ny fiantraikany. Izany no ampiasaina amin'ny atrikasa be, trano fanatobiana entana, ny trano fonenana sy ny isan-karazany tafo maharitra amin'ny taona maro fampiharana tantara amin'ny tany mandroso maro.
Shengyu UPVC tafo taratasy dia safidy vaovao ho an'ny tafo sy ny rindrina cladding fanorenana. Tena mafy, mateza ny lokony sy maivana, tsara kokoa noho ny vy sy ny tafo taratasy. Zava-dehibe kokoa, dia tsy harafesina amin'ny orinasa mavesatra zaridaina.
hateviny sakany Cover Width Purlin Space Length Weight surface Color
1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm 1025mm 940mm 800mm Araka ny Required 3.0-6.0KG / ㎡ malamalama White, Blue, Gray, Terracotta, Red
Malaza Weather fanoherana
Araka ny sosona ambony fitaovana, ASA injeniera resin dia faran'izay mety ho fampiasana ivelan'ny trano. Na tratran'ny hiringiriny-Violet taratra, dampness, hafanana, chillness sy ny fiantraikany, ny vokatra sisa ny fahamarinan-toerana ny loko sy ny fananana ara-batana. Fitsapana natao tany ho Antitra Mihitsy Test Center ao Arizona sy Florida manaporofo izay kely noho △ E 5 ao anatin'ny 10 taona.
Shengyu plastika tafo 6,000h taratasy mandalo fitsapana be taona amin'ny China National Center for Chemical Test fitaovana sy ny vokatry △ E <4.
Shengyu UPVC mitafo fanitso tafo taratasy, ny hafanana conduction modulus dia 0,325 W / M. K, izay 1/3 mitovy amin'ny an'ny 10mm hateviny tanimanga fanitso, 1/5 amin'ny an'ny 10mm hateviny simenitra fanitso, 1/2000 amin'ny an'ny 5mm hatevin'ny vy loko fanitso.
Tsara anti-harafesiny fampisehoana
Shengyu UPVC mitafo fanitso tafo taratasy, ny sosona ambony (ASA resin) manana fampisehoana lehibe amin'ny harafesiny manohitra ny fitsapana, izay tsy mivily ny fahasimban'ny ny orana sy ny ranomandry. ASA resin dia mahatohitra ny zavatra simika maro toy ny asidra, alkaline, sira, sns Noho izany, dia mety ho fampiharana ivelan'ny trano ao amin'ny faritra lehibe costal sira sy ny zavona mavesatra harafesiny fahalotoan'ny rivotra.
ny eny amin'ny tafo taratasy dia matevina sady mandimandina, izay manana vokany mitovy toy ny ravina lota. Tsy mitelina vovoka sy mora azo diovina amin'ny alalan'ny orana.
Tsara anti-entana fampisehoana
Shengyu UPVC mitafo fanitso tafo taratasy manana fahafahana matanjaka ho an'ny be-jaza izy. Ny fitsapana, nitarika ny Shanghai Municipal Building Material Component Quality Fanaraha-maso sy Test Station, manaporofo fa tsy misy hirika amin'ny toe-800mm manohana androm ary nampihatra entana 150kg.
iray tapa-tafo fitsipika taratasy milanja 1.87-6.0kg isaky ny metatra toradroa.
amin'i Shina Certificate ny Tontolo Iainana fametahaka marika, tsy manaporofo izany vokatra taratra, volatilizable fitaovana sy ny fandotoana. Inona no kokoa, dia azo amboarina tanteraka.
Previous: FRP daylighting taratasy WW1025
Next: UPVC rindrina tontonana T1110
1.UPVC (ASA) rooing taratasy dia hampiharina amin'ny tafo pitches avy amin'ny 8 ° ny 22 °, amin'ny androm purlin tsy mihoatra ny 800mm.
T980 tafo taratasy dia hampiharina amin'ny tafo pitches avy amin'ny 6 ° ny 22 °, amin'ny androm purlin tsy mihoatra ny 1200mm.
2.Thermal miaro zavatra tsy azo ampiasaina mivantana eo ambanin'ny taratasy.
Mba mampiasa tohatra na hafa nandritra ny fametrahana foto-drafitrasa ilaina.
Aza nitsangana teo anelanelan'ny roa purlins nandritra ny fametrahana.
Fa ny gabled tafo, fanitso eo amin'ny lafiny tsirairay dia tokony hapetraka tamin'izany andro izany ny Ridge kapila tanimanga.
Fametrahana dia tsy nanolorana azy ho ho entina teo am-mari-pana eto ambany ℃ -5.
Hametraka ny matihanina roofers mba ho azo antoka ny kalitaon'ny fametrahana.
marindrano hifanindry amin'ny alalan'ny onja sy ny iray mitsangana hifanindry tsy latsaky ny 100mm.
ny tafo fanitso ary rindrina cladding azo ferana amin'ny alalan'ny nanome faraingo na tena nipaipaika screws.
Fa folaka avokoa ny lamba, roa karazana faraingo tokony raikitra araka ny tokony ho tamin'ny iray purlin, nandalo ny onja crest.
Ahevaheva rehetra mitsangana crest amin'ny faritra nifandimby dia tokony ho raikitra ny purlin amin'ny farango, sy ny fomba fanamafisana dia tokony ho voan'ny faritra amin'ny rivotra mavesatra.
Fa manda claddings, ny overlaps teo anelanelan'ny roa purlins dia tokony ho ferana amin'ny alalan'ny rivets roa.
Fingotra cushions tokony ho ampiasaina eo ambanin'ny taratasy, raha manamboatra ny farango, ny voanjo visy dia tokony ho araka ny tokony tightened, fa tsy ny-mafy.
6.Roofing taratasy dia tokony ho faty ny banga ridana tsofa.
fampiasana herinaratra fandavahana ny fandavahana lavaka.
Mba ho azo antoka ny fanitso efa nataony araka ny tokony ho amin'ny purlins alohan'ny ary atsofony lavaka.
Ny lavaka savaivony tokony ho 2mm midadasika kokoa noho ny an'ny hook mandrel.
Mba mampiasa PVC lakaoly mba asio tombo-kase ny Mis-drilled lavaka.
8.Storage sy manazava
ny taratasy dia tokony ho voatahiry amin'ny fiaramanidina mafy orina, izay tokony ho ela kokoa noho ny taratasy.
Taratasy fohy dia tokony hatao amin'ny taratasy intsony mba tsy ny deformation.
Aza samy hafa niisa mombamomba ny lambam-pandriana miaraka.
Mba mitahiry ny taratasy ao amin'ny alokaloka.
Aza fandravana, nisafo na Scratching ho etỳ ambonin'ny nandritra ny manazava.
3 Layer Upvc Roof taila
Carbon Fibre Upvc Roof Sheet
Clear mitafo fanitso Plastic Roofing Sheets
Composite Asa mifono Upvc Roof Sheet
Corruagted Roofing Sheet
Mitafo fanitso Fiberglass Roofing
mitafo fanitso plastika Clear Sheets
Mitafo fanitso Plastic Roofing
mitafo fanitso Plastic Roofing Sheets ho entona
mitafo fanitso PVC Material Roofing Sheet
Mitafo fanitso PVC Roof Sheet
Mitafo fanitso Roof Sheet
mitafo fanitso Roofing Sheets
Mitafo fanitso Roofing Sheets Sizes
Mitafo fanitso Upvc Roofing Sheets
Fibre mitafo fanitso Roofing Sheets
Heavy Adidy mitafo fanitso Plastic Roofing Sheets
High Hery Upvc Roof Sheet
Kerala Clear mitafo fanitso Plastic Roof Sheets
Large mitafo fanitso Plastic Sheets
Long androm Color mifono mitafo fanitso Roofing Sheet
Multi sosona Upvc Roofing Tile
Plastika mitafo fanitso Sheet Price
Plastic Upvc Roof Sheet
PVC Ary Upvc Wave Roofing Shingles Sheets
PVC mitafo fanitso Plastic Sheets
PVC mitafo fanitso Roofing
PVC mitafo fanitso Roofing Sheets
PVC / Upvc Roof Sheets
Raw Material Fa mitafo fanitso Roofing Sheet
Resin Synthetic Upvc Plastic Roofing Sheet
Upvc plastika tafo Sheet
Upvc Roof Sheetcorrugated Roofing Sheet
nampiasaina mitafo fanitso Roof Sheet
White mitafo fanitso Roofing Sheet
Address: No.180 Xinglong Rd, Duodao District, Jingmen City, Hubei PR Sina